News 18 Nepal || सुनको मुल्य आजपनि घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
सुनको मुल्य आजपनि घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आइतबार पनि सुनको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ३ सयले घटेर प्रतितोला ९६ हजार एक सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको ९६ हजार ४ सयमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, आइतबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९५ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आइतबार चाँदीको मुल्य भने सामान्य वृद्धि भएको छ । आइतबार चाँदीको मुल्यमा चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले बढेर १ हजार ३२० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।